Qiimaha lacagta Bitcoin ayaa hoos u dhacay ganacsigii subaxnimada maanta oo Axad ah… – Hagaag.com
Qiimaha lacagta Bitcoin ayaa hoos u dhacay ganacsigii subaxnimada maanta oo Axad ah…
Posted on 18 Abriil 2021 by Admin in Dhaqaalaha // 0 Comments
Qiimaha lacagta digital-ka ee “Bitcoin” ayaa hoos u dhacay ganacsiga subaxnimada maanta oo Axad ah, in ka badan 9.5%, ama $ 5931, taas oo ay ugu wacan tahay macaashka ay ganacsatada ka heleen oo ay kala baxeen, ka dib markii uu kor u kac xoog leh ku yimid usbuucii hore.
Waqtiga (07: 16 GMT), qiimaha halkii Bitcoin ayaa hoos ugu dhacay 56.1 kun oo doolar, wuxuu hoos uga dhacay qiimaha suuqa markii la xiray Sabtidii oo ahaa 62.03 kun halkii Bitcoin.
Ganacsatadu waxay sameeyeen iska iibin baaxad leh intii lagu jiray saacadihii ugu horreeyay maanta oo Axad ah, si ay ugu daneystaan ​​faa’iidooyinka ay ka gaareen macaamilkii usbuucii la soo dhaafay, iyada oo halkii Bitcoin waqtigaas uu gaaray in ka badan $ 64,000, oo aheyd meel aan horey u gaarin.
Khubarada iyo hay’adaha maaliyadeed ee adduunka oo dhan waxay had iyo jeer ka digaan isbeddelka sare ee sicirka lacagaha digitalka, maxaa yeelay kuma saleysna aaladaha dayrka u noqda sida dahabka oo kale, sarrifka lacagaha qalaad, ama hay’adaha waaweyn ee maaliyadeed.
Qiimaha suuqa ee lacagta Bitcoin ee ugu caansan adduunka waxay gaaraysaa 1.049 tiriliyan oo dollar, oo loo qaybiyay in ka badan 18 milyan iyo 685 Bitcoin oo suuqa ku wareegato, iyadoo 21 milyan oo Bitcoin loogu talagalay inay ku wareegto adduunka oo dhan.
Baahida caalamiga ah ee loo qabo lacagta ugu caansan ayaa kor u kacday, inkasta oo ay kordheen qiimaha suuqeeda, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in laga yaabo inay jebiso caqabadda $ 100,000 dabayaaqada sanadkan.
Lacagaha digitalka ayaan laheyn number taxane ah, sidoo kale ma hoos tagto dowlado iyo bangiyada dhexe sida lacagta caadiga ah oo kale, waxaa macaamilkeeda ka dhacaa gudaha Internet-ka, iyadoo qofna kuu muuqan.